Ungawungenisa njani umfanekiso kaGoogle woMhlaba nge-AutoCAD -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukungenisa umfanekiso weGoogle Earth nge-AutoCAD
AutoCAD-AutoDeskGoogle umhlaba / imephuGIS asibonise
Ukungenisa umfanekiso weGoogle Earth nge-AutoCAD
Ngaphambi kokuba sibone indlela yokwenza ngayo asibonise, ArcGIS, kwaye sothuswa kukuba ukuthandwa kwe-AutoCAD akufikanga kuthethathethwano olulungileyo noGoogle ukuze ikwazi ukuyenza nayo. Masibone okuhle, okubi nokubi kolu thethwano:
... OKUNGENYE ... kulula kakhulu
Khetha ukuthunyelwa kwiGoogle Earth
Ngale nto, into ekufuneka uyenzile kukuvula umhlaba kuGoogle, ucime umaleko wendlela, ikhampasi yasemantla kunye nembono ye-orthogonal. Kufuneka kukhunjulwe ukuba indlela ebhetele esinayo, siya kuba nakho ukufumana isisombululo esingcono, kodwa kuyinyani ukuba imifanekiso emininzi iyafuneka.
Ukungenisa umfanekiso ukusuka kwi-AutoCAD
Ukuba u-AutoCAD, akufanele unciphise iwindow yeGoogleEarth, okanye uyivale kodwa gcina umbono ujongiswe ngenxa yokuba yintoni le nkqubo eyenza stream se tyenziswe
Emva koko kwi-AutoCAD sisebenzisa i-icon eboniswe ngasekunene, okanye siyisebenzise ngebar yomyalelo "yokungeniswa"
Ukuba une AutoCAD okanye AutoCAD Civil 3D Map3D, umfanekiso georeferenced uzingela phakathi uququzelelo lwebhokisi Google Earth (ukuba inkqubo projektha ukuba umzobo ichazwe ukusetyenziswa)
Ukuba awunazo naziphi na iinkqubo ezimbini ezidlulileyo, kodwa yi-AutoCAD kuphela, okanye uyilo, ukhetho luya kwenziwa ukubonisa iikona ezimbini zomfanekiso kunye ne-engile yokujikeleza ngokungathi sisebenzisa umphathi we-raster. Ke kwangaphambili kufanelekile ukuba neekona ze-quadrant ziboniswe njengoko kubonisiwe ngaphambili kwipost of georeferencing imifanekiso esuka kwiGoogle Earth ebubini.
Ukufakela le sicelo kufuneka ukhuphe kwiphepha le-Labs le-AutoDesk, kwifayile exinyiweyo efanayo ifumane inguqulo ye-AutoCAD 2007, nangona lo kuphela usebenzela ukushicilela imizekelo ye-kml ukusuka kwi-AutoCAD ukuya kwi-Google Earth.
Xa unzipped ifayili, uyiqhuba uze ukhethe indlela ukufakelwa AutoCAD aluhambisani apho sifuna add-on ifakiwe, ukuba une inkqubo ngaphezu kwesinye, i ufakelo kufuneka kwenziwe ngamnye.
... BAD ...
Nangona yinkqubo egunyazisiweyo nguGoogle Earh, umfanekiso ukwigreyidi kwaye hayi ngombala, ngamalungiselelo eGoogle. Nangona kuya kubakho abo balawula ngolu hlobo njengoko kunjalo I-3D i-mesh iyayihlawula njengempahla.
Emva koko lo mfanekiso ungeniswe kwifolda efanayo apho ifowuni ye-dwg igcinwa, kunye nokwandiswa .jpg kwaye ithatha iileta zokuqala zegama lefayile ye vector ... nangona i-jpg kunye neepropati ze-georeferencing.
Ubukhulu pixel na ukusonjululwa isikrini, kangangokuba ngobukhulu kufutshane catch kwenziwa pixel ezincinane ziza kufunyanwa njengoko ifayile ingqalelo kuphela uququzelelo yesakhelo wazolula ukuya dimencion.
... IGLY ...
Ithuluzi lebhubhorki, i-AutoDesk ayiqinisekisi ukuba ukuba kuqukwa kwinguqu elandelayo iya kukhululeka ... sinethemba
Ngenxa yokuba inguqulo yebhubhoratri, inikezelwa "njengokuba injalo", kodwa ke, i-AutoCAD ihlale inje kwaye kwimeko yeGoogle, yonke into ibe yiBeta.
Esi sixhobo sisebenza kuphela kwiinguqulelo zika-2008, zombini i-AutoCAD, AutoCAD Architectural, AutoCAD Civil 3D kunye neMephu ye-AutoCAD 3D.
Isebenza kuphela nelayisenisi Google Earth Pro, ngokucacileyo, ngoko ke ukhulula i-$ 400 efanelekileyo yile layisenisi okanye ulahle iso lakho.
... Nangona kunjalo, ndibonakala ndikhetha ukuqhubeka ndiyenza kunye nayo asibonise, kuba yindleko kuphela i-$ 245 yokuba ndiyihlawule.
… Hlaziya. I-AutoDesk ifake esi sixhobo njenge-AutoCAD 2009, ndenza ifayile ye phucula le nguqulelo entsha yokukhuphela, ngoko sele sele iquka oko Kuboniswa kule post.
Esinye isixhobo esenza oku, kwaye esiyidlula, ngumfanekiso wombala, ngokuchanekileyo ngakumbi nangomfanekiso, I-Plex.Earth
AutoDesk Dwg Umhlaba ka-Google KML GIS asibonise
Kubonakala sengathi i-Internet Explorer iya kufa
Ukungenisa i-3D Surface ukusuka kwi-Google Earth ukuya kwi-AutoCAD
i-percy encinci ye-carpio uthi:
Ndicinga ukuba kukho into enomdla kwibhasi ye-madca ye-3d, kwaye ndifuna i-autocad incwadi ye-3d ngesiNgesi sibonga
Yintoni eyenzekayo kukuba ayisebenzi, kuba nganye intshukumo ine-twist ephazamisayo, leyo i-Google Earth ibangela ukuthintela ukuba ungene kwi-mosaic enezixhobo zesikrini esincinci.
Ukongeza, ukuba usebenze umzekelo 3D uya kuba nobunzima obuninzi.
Renan Fernandez Garcia uthi:
Ndigcina ezininzi ze-google kwi-disk ekhuni uze uzifake kwi-autocad kwaye ufumane imephu enezigqibo ezingcono; kodwa xa ndiza kunamathisela iileyili ndiyazi ukuba kukho ukuphazamiseka.
Kwindawo enye ye-mosaic ifanelana kakuhle kodwa kwenye indawo iphelelani.
Ndiyidlulisela kwi-autocad usebenzisa i-rester image reference kunye nefestile ndikhubaza isikali / ok.
benzisa i sicelo:
1) I-Screeny ye-MAC ungabamba yonke into eyenzekayo kwisikrini sakho
I-2) I-Camtasia ye-MAC yenza nje nge-Screeny
kunye nale vidiyo yohambo lwakho ... ungayifaka kwi-PPT yakho
Akukho mbono, ndicinga ukuba awukwazi
Ndenza umboniso wendawo yamandla kwaye ndifuna ukufumana iphondo elithile, ndingathanda ukuyifakraza kwaye ndiyirekhodile ngekhamera ngeGoogle Earth ndize ndiyifake kwindawo yombane, ngaba umntu unokundixelela ukuba ndingayenza njani?
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingayifaka njani ividiyo (eyabhalwa njengehambo kunye nekhamera ekhoyo kwiprogram) ukusuka kwiGoogle umhlaba ukuya kwindawo yegunya.
Umyalelo wokungenisa awuzange usebenze kum, ngaphandle kokulandela imiyalelo
Uthetha ukuthini ubugqwetha?, Ukufuduka, ukujija….?
xa ufaka umfanekiso osesktshiweyo uveza ukuphazamiseka kwi-X okanye Y, ngaba umntu uyazi indlela yokulungisa ukuphazamiseka kwi-axis nganye, ngethemba lokuba ku-autocad?
Ewe, i-esque kwi-2008 version sele idibeneyo
Ndine-AutoCad C3D 2008 andinako ukungenisa ngomyalelo othi…Kodwa ndifumanise ukuba ndingangenisa umphezulu ngaphandle komfanekiso ngomyalelo we "importgesurface"
Ndingathanda ukwazi okunye ukusebenza neDesktophu yomhlaba ye-Autodesk
Ndizamile isixhobo esinomdla (Isikhupheli semephu sikaGoogle) ukubamba imephu zikaGoogle pngs.
Ingqungquthela yamahhala iyahla ukuya kwi-zoom ye-13.
Kwakhona kuvumela ukujoyina yonke i-PNGs.
Emva koko nge-Quantum GIS kunye nengxelo yokuhla kweendleko zeendleko (ijoni kunye nezicwangciso) kwaye uyisebenzisa njengesiseko kwi-GIS yakho.
Ukufundisa okuthakazelisayo, uyathokoza